राष्ट्रपतिज्यू, थिति बसाल्न सक्नुहुन्छ? - हङकङ - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
राष्ट्रपतिज्यू, थिति बसाल्न सक्नुहुन्छ?
जुनु राना हङकङ, बैशाख २१
देशमा थिति बसाल्ने वा सुशासन कायम गर्ने पहिलो र उदाहरणीय निकाय भनेको राष्ट्रपति संस्था नै हो नि, हैन र राष्ट्रपति ज्यू?
तपाईं त एउटी आमा। एउटी श्रीमती अनि कसैकी छोरी पनि। र, अहिले रास्ट्र आमा हुनुहुन्छ। समग्र देशकै आमा। देश र जनता कि अभिभावक। हिजो संसदको संयुक्त सभामा तपाईंले ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ पढ्दा ‘मेरो सरकार’ भन्नुभयो। त्यो हेर्दा धेरैलाई बडो ताजुब लागेको देखिएको छ।
तपाईं उमेरले हाम्री हजुरआमा समान हुनुहुन्छ। यो अर्थमा पनि तपाईंप्रति मैले अझ बढी सम्मान र आदर गर्नुपर्ने हुन्छ। एक जुझारु महिला, जसले जीवनभर अनेकौं संघर्ष र कठिन मोडहरु पार गर्दै आजको स्थितिसम्म आउनु भो। ती सबै कठिन अवस्था पार गरेर यहाँसम्म आउन तपाईं जस्तो एकल महिलालाई पक्कै पनि सहज भएन होला। किन कि हाम्रो देश पुरुष प्रधान छ र पितृसत्तात्मक सोच राख्ने समाज छ, जहाँ हरेक क्षेत्रमा पुरुषको राज र प्रभाव छ। यस्तो अवस्थामा पनि जुन किसिमको संघर्ष र लगनशीलता साथ अगाडि आउनु भयो, यति ठूलो साहस थोरै महिलामा मात्रै हुन्छ सायद।
जननेता मदन भण्डारीको रास्ट्र र जनता प्रतिको योगदान स्वरुप एमाले हुँदै देशको सबैभन्दा बलियो पार्टी बन्न सफल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट तपाईंको राजनीतिक यात्रा आरम्भ भएकोबारे म धेरथोर अवगत छु।
तपाईं एक नारी। साधारण परिवारकी छोरी। पूर्वी पहाडी जिल्लामा जन्मेर रास्ट्रको केन्द्रीय राजनीतिमा तपाईंको उपस्थिति म र म जस्ता हरेक छोरिहरुका लागि गौरवको विषय हो। महिलाप्रति अनुदार समाजमा तपाईंको उपस्थिति नै गौरव बनेको छ।
तर किन तपाईं सधैं विवादमा? दुई तिहाई बहुमतले बनेको नेपालको प्रथम संघीय सरकारको साथ पाएकी प्रथम महिला राष्ट्रपतिसँग किन यति धेरै विरोध जोडिइरहन्छन्? लामो र कठिन संघर्षपछि हटाइएको राजसंस्थाको झल्को आउने गरि संघीय गणतान्त्रिक नेपालकी राष्ट्रपति किन राजाले नै गर्ने जस्तो क्रियाकलापमा लागिपर्नु भएको छ? कहिले सडक जाम, कहिले आकाश जाम त कहिले महंगो सवारी जस्ता विषयमा किन देशकी प्रथम महिला राष्ट्रपतिको उग्र बिरोध भैरहन्छ? पार्टीगत विरोध त छँदैछ, आम मानिस पनि किन विरोध र विवादमा उत्रने अवस्था आइरहेको छ?
देशमा चासो राख्नुपर्ने विषय र मुद्दाहरु अनेकौं छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि महिला र बालबालिकाको हकहितका विषय छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि पुनर्निर्माणका विषय छन्। तर दुखका साथ भन्दा अहिले राष्ट्रपतिको क्रियाकलापमा जति कटाक्ष र विवाद सायदै अन्य विषयमा भइरहेको छ। किन यस्तो भैरहेछ? राष्ट्रपति एक महिला हुनुको कारणले गर्दा यसरी विवाद सिर्जना गरिएको त होइन?
त्यस्तै विवादको शृङ्खला शुक्रबार तपाईंले संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनमा पनि जोडिएको छ। नेपाल सरकार वा हाम्रो सरकार भन्नुको सट्टा तपाईंले अनेक पटक ‘मेरो सरकार’ भन्दा धेरैले तिब्र आक्रोश पोखेका छन्। नयाँ राजतन्त्र वा नयाँ राजाको उदय भएको भन्दै कटाक्ष गरिरहका छन्। कतिले अराजक र अमान्य शब्दमा समेत मुख छोडिरहेका छन्।
शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसदतर्फ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारी
आखिर यस्तो किन भैरहेको छ?
सामाजिक सञ्जालमा ‘मेरो सरकार’ भनेकोमा राष्ट्रपतिलाई निकै विवादमा तानिएको छ। तपाईंले सम्बोधनको क्रममा गत वर्ष जस्तै ‘नेपाल सरकार’ भनेको भए के बिग्रन्थ्यो? विदेशमा बस्ने मजस्ता लाखौं नेपाली आफ्नो देशमा घट्ने यस्ता घटनाप्रति चासो राख्छौं। विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगेपनि आफ्नो मातृभूमिप्रति चासो राख्नु र माया गर्नु नागरिकको दायित्व पनि हो।
म कुनै राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता होइन न कुनै विषयको विज्ञ नै। म एकजना नागरिक हुँ, राष्ट्रपति जस्तै एक महिला हुँ। मैले यहाँ राजनीतिक राय दिन चाहेको होइन। न सिकाउन नै खोजेकी हुँ। देशको अभिभावकसँग हरेक नागरिकका केही न केही अपेक्षा हुन्छन्। आफ्नो देश थितिमा चलोस् भन्ने लाग्छ। आफ्ना नेताले नागरिकको हितमा काम गरून् भन्ने हुन्छ। र, त्यस्तो थिति बसाल्ने वा सुशासन कायम गर्ने पहिलो र उदाहरणीय निकाय भनेको सायद राष्ट्रपति संस्था नै हो।
म जस्तो देशलाई माया गर्ने हरेक नागरिकले सोध्न सक्छन्– राष्ट्रपतिले गर्ने सम्बोधन वा प्रस्तुती तयार गर्ने कर्मचारी वा स्वकीय सचीवले यति धेरै त्रुटि किन गर्छन्? किन औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गर्नुअघि त्यस्ता डकुमेन्ट सच्याइँदैनन्? आम नागरिक र रास्ट्रको नाम जोडिएका संस्थाको इज्जतमाथि किन बारम्बार खेलवाड गरिन्छ?
हाम्रा कस्ता सरकारी निकाय हुन् जसले छिमेकी देशमा आपत पर्दा सहानुभूति पत्र लेख्नुपर्नेमा बधाई पत्र लेखेर राष्ट्रपतिका नाममा सार्वजनिक गर्छन्? सारा नेपालीले लज्जाबोध गर्नु पर्ने र शीर झुकाउनु पर्ने यस्ता घटना बारम्बार हुँदा पनि किन कोही कसैले जिम्मेवारी लिँदैनन्?
लोकतन्त्रको पुनस्थापना भएर नयाँ संविधान पनि आएपछि हामीले अपेक्षा गरेका थियौं– देशमा अब सुशासन र स्वस्थ समाज निर्माण हुनेछ। नागरिकमा चेतना र विवेक बढ्ने छ। महिला हिंसा रोकिने छ। तर त्यस्तो भएन। अहिले दिनहुुँ जसो महिलाको बलात्कार र हत्या भएको खबर आइरहेको छ।
देशमा महिला राष्ट्रपति भएको अवसर हामी महिलाले उपयोग गर्न पाएका छेनौं। महिला आफ्नै देशमा सुरक्षित नै छैनौं। महिलाको सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य चेतना वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्रपतिले पहल गर्नु पर्ने होइन? देशमा महिला राष्ट्रपति भएको बेला महिलालाई समग्रमा माथि उठाउने अभियानहरू सञ्चालन गर्न सकिँदैन?
हामी तपाईंले गरेका संघर्ष र अनुभवबाट केही सिक्न र जान्न चाहन्छौं। देशको सक्रिय र अब्बल अभिभावक बनेर दिशानिर्देश गरेको हेर्न चाहन्छौं। कृपया तपाईं मूर्तीसमान नबनिदिनोस्। हामी तपाईंलाई निडर र निस्पक्ष निर्णय गर्न सक्ने आँट भएकी महान नारी भनेर आम नागरिकले प्रशंसा गरेको देख्न चाहन्छौं। इतिहासमा गौरवको प्रतिमूर्ती बनेर अंकित हुने साहसी नारी बनेको हेर्न चाहन्छौं। त्यसैले तपाईं मूर्तीसमान नभइदिनोस्।
यो लेख फुर्सदमा लेखिएको होइन। चर्चित हुने रहरले लेखेको पनि होइन। अनेक कौतुहलता र जिज्ञासाले दिमाग उथलपुथल पारेपछि काम गर्ने क्रममै खाली समय निकालेर लेखेको हुँ। आखिर म पनि एक आमा हुँ, जो अर्की आमाको अस्तित्वमै दाग लाग्ने गरि अनेक आरोप र लान्छना लाग्दा चुपचाप बस्न सक्दिनँ।
प्रकाशित २१ बैशाख २०७६, शनिबार | 2019-05-04 14:39:30
जुनु राना हङकङस्थित लेखक हुन्
जुनु रानाबाट थप
हङकङमा अझै बद्नाम हुने कि सुध्रिने?
फेरि अर्को पटक देश छोड्दा
बाटोको त्यो पोलमा उभिइरहन्थ्यो ऊ
लाहुरेनीको ‘लाहुरेनी फूल’ को प्रतीक्षा
नयाँ वर्षमा रिक्साचालक इन्द्रावतीको सम्झना
त्यो माओवादी पार्टीको यो असहज बिलय
मैले भाइटीका लगाइदिएका ती दुई भाइ